Famoronana mifanohitra amin'ny zon'ny mpamorona | Martech Zone
Alarobia, Jolay 9, 2008 Alarobia, Jolay 9, 2008 Douglas Karr
Ity angamba, iray amin'ireo fifanakalozan-kevitra tsara indrindra momba ny fomba lalàna momba ny zon'ny mpamorona (IMO) dia tsy rariny tsy ara-drariny, fa koa manimba ny famoronana ny kolontsaintsika. Ny fanaintainana aterak'ireny lalàna ireny dia mihabe noho ny fipoahan'ny fotoana omen'ny Internet antsika. Ny tena mamy aza dia ny hafatra sy ny tantara no resahina eto Larry Lessig, mpisolovava.
Satroka tendron'ny Lorraine ho an'ny mahita!
Tags: mandray vahinyOptimizationTravelhevitra fitsangatsangananaWriting
Jul 12, 2008 amin'ny 1: 20 AM
Ie, tiako ny hafany. Ohatra, mamaky aho Kolontsaina malalaka taona maro lasa, ary tsapako tsara ny fanaintainany. Na izany aza, miaraka amin'ny fitoriana voavidy vola sy vidiny rehetra ananantsika ao amin'ny kongresy dia tsy manantena aho fa hiova ny zavatra amin'ny ho avy. ;-(
12 Jul 2008 amin'ny 3:25 PM
Tena manana olana isika eto amin'ity firenena ity izay mihoatra ny zon'ny tsirairay ny zon'ny orinasa.